Mkpụrụ ala mmadụ / onye ọrụ nchebe Nchekwa (Singapore) | Nchekwa nke Man Down / Lone Worker Safety Solution Ngwaọrụ nchekwa nke mmadu - Gbaa mbọ hụ na a mara gị ma onye ọrụ nwere ihe mberede
Zoro Edekọ Voice edekọ
ụdị iHelp 2 - Man Down Sistemu - Ngwọta Nchedo Ọrụ nke Onye Ọrụ
Lipu, tufuo ma daa, bu udiri ihe mberede nke ebe oru ndi mmadu na abia otutu ulo oru. Ma ọ ga-ada site na elu ma ọ bụ tufuo ya na eriri, ihe ọghọm ndị dị otú a nwere ike ibute nnukwu mmerụ ahụ, n'ọnọdụ ndị jọgburu onwe ya, ọbụna ndị na-egbu ndị ọrụ. Immediatelymara ozugbo mgbe ihe dị otu a mere nwere ike ikwe ka ndị were ọrụ were ọsọ kpọọ maka enyemaka ahụike ma gbochie ọnọdụ ọjọọ. Nke a dị mkpa karịsịa n'ọnọdụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ naanị ya na gburugburu dịpụrụ adịpụ, anya. Ọ ga-esiri ha ike ịkpọ maka nlebara anya n'oge mkpa mgbe ha merụrụ ahụ, ma n'ihi ya, mkpu ala na ngwaọrụ dị ka ihe ngwọta ewu ewu maka ọnọdụ ndị dị otú ahụ.
iHelp 2.0 Ọrụ GPS Tracker Device nwere ike nyochaa ọnọdụ onye ọrụ na ezigbo oge. Mgbe ọdịda dara, iHelp 2.0 nwere ike ịkpalite ịdọ aka na ekwentị ekwentị onye ọzọ na akpaghị aka, ka enyere enyemaka ahụ ozigbo
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịkpọ oku ma ọ bụ ziga ọkwa ya na onye nlekọta ya ma ọ bụrụ na mberede.
Ihe Ngwaahịa gosipụtara na Akụkọ Obodo
Ndị ọrụ na-egwu egwu
Maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ngalaba kachasị dị ize ndụ dịka owuwu, ihe ndị sitere n'okike, ahụike, nchekwa na mbugharị ụgbọ elu, Aware 360 ​​na-enye ndị ọrụ nchekwa ihe nchekwa nchekwa iji hụ na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta enyemaka ma ọ bụ enyemaka ahụike mgbe achọrọ ya kachasị. Ọ bụrụ igwe satịlaịtị (GPS), ngwa ama ma ọ bụ ihe ngwa ndị ọzọ dị egwu, anyị na-ahụ na a na-ebulite teknụzụ ziri ezi maka ọnọdụ ọ bụla pụrụ iche.
Ejiri kacha mma maka:
- Ndị na-ahụ maka ọrụ
- Ndị na-eme ọrụ na gburugburu nsogbu
- Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka tegbara
Nchoputa Udiri & Ntughari
Okenye nwere ike iji mkpịsị ugodi nwee ike ịgwa ndị ezinụlọ ya okwu.
Dabere na itinye-na / dị mfe & Baa Uru (4 Agba)
Ngwa weebụ & Mkpanaaka maka nleba anya (ụzọ akụkọ ihe mere eme / ezigbo oge)
A ga-ewepụta ngwa weebụ & smartphone na ntinye aka. Inwere ike iji PC gị, Mbadamba ụrọ ma ọ bụ ama, nyochaa ebe ngwaọrụ ahụ (ụzọ akụkọ ihe mere eme / ezigbo oge).
1. 3G (WCDMA) nke ụwa kacha nta / akụ nke ekwentị
2. Ebe a na-adọpụ ọdụ ụgbọ mmiri na-enye usoro ọzọ iji chajụọ ma mee ka ọ dị ngwa ngwa ma dị mfe iji
3. Real oge nsuso site na satịlaịtị GPS
4. Nyocha site na RF (ọ bụghị ugbu a)
5. AGPS, TTFF na sekọnd 30 (nkeji iri maka GPRS gụnyere)
6. Dara mkpu maka ụmụaka na ndị agadi, yana ndị ọrịa
7. Ihe owuwu wuru wuru
8. gụnyere batrị 900 mAh Lithium batrị. Oge njikere: ụbọchị iri
9. Wuru 3D XNUMXD-rụọ maka ngagharị, mkpu mkpu na njikwa ike
10. Nnyocha olu
11. Uzo abuo ikwurita okwu
12. Ebe ndekọ data: ebe 60000
13. Ọrụ GPRS na-arụ ọrụ na-ebigharị ebe ndị isi
14. Firmware kwalitere ikuku
15. Zaa njikọ njikọta ọnọdụ dị ugbu a
16. Bọtịnụ ọnọdụ mberede
17. Oti mkpu mpaghara, Oke mkpu
18. Mkpu mkpu
19. U-blox teknụzụ GPS
WCDMA Module: Telit UL865 (900 / 2100MHZ na 850 / 1900mhz), 3G (WCDMA)
Ndị òtù akwadoro
UMTS / HSPA 2 / 900 MHz 2100 (3G)
UMTS / HSPA 2 / 850 MHz 1900 (3G)
Communication: TCP / IP jikọtara GNS 10, SMS ozi, Voice
poolu: Ejiri na ngwa FPC
Chipset GPS: uBlox 0702 (AGPS Nkwado)
Oge nnata: 1575.42 MHz
Igwe mmiri na-amalite: ihe dịka 32S, Ụdị TTFF dị (95%)
Ọmalite ịmalite: ihe dị ka 32S, ụdị TTFF dị (95%)
Mmalite dị ọkụ: ihe dịka: 1S, Ụdị TTFF dị (95%)
Antenna: Ejiri eriri e ji rụọ ya
Ịgbaji voltage: DC5V
Ndaghachi batrị: Rechargeable, 3.7V, 800mAh (Li-Poly)
Njikọta: Njikọ USB USB
Kaadị SIM: Kaadị SIM SIM
Accelerometer: Ejiri ya na 3G ihe mgbagwoju anya
Nchekwa Flash: Wuru na 8MB ebe nchekwa
Nchịkọta nri ugbu a: 40 ~ 60mAh
Nri oriri ụra: 5 ~ 10mAh (GPS)
Okpomọkụ na-arụ ọrụ: -20 Celsius C ka + 80 Celsius C
Nchekwa Nchekwa: -40 Celsius C na + 85 Celsius C
Mmiri: 5% -95% na-abụghị condensing
Mainframe Ahịa: 61mm X 44mm X 16mm
Ebu ibu (NET): 30g
iHelp Man Down Sistemu - Ndepụta Ndị Ahịa Onye Ọrụ Na - akpata Ngwọta Nchedo Ọrụ
Nzuzo 33718 36 Echiche Taa
Kedu ihe mmadụ na-eme ka mkpuchi?
Mmadụ ala mkpuchi bụ ngwaọrụ ndị na-achọpụta ọdịda na iziga nwoke ka ọ dị njikere iji nyochaa anya. Enwere ọnụọgụ nhọrọ nhọrọ ndị mmadụ na-agbanye n'ọma ahịa taa, site na ngwa ngwa ọkpụkpọ na teknụzụ dị egwu. Mmadụ ala ala egwu bụ ihe ngwọta dị ukwuu maka ndị na-arụ ọrụ na gburugburu ebe ọ na-agba, njem na ọdịda bụ ihe ize ndụ, ndị na-arịa ọrịa na ndị nwere nsogbu nke mberede. Mmadụ na-ada ụda bụ ngwá ọrụ kachasị mkpa maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị ike ịmeghe onye ọ bụla ma ọ bụrụ na ha na-ada ada ma na-akụ aka n'amaghị ama ma ọ bụ enweghị ike ịkpọ oku ekwentị.
Onye nchekwa na-enweghị onye ọrụ: Oge iji wepụta Oke
Onye ọrụ naanị ya bụ onye na-arụ ọrụ nke na-eme naanị ya na ndị ọrụ ndị ọzọ na-esoghị ya. Ndị ọrụ dị otú ahụ nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ n'ihi na enweghị onye ga - enyere ha aka. Alonenọ naanị gị onwe gị na-etinye ọnọdụ na ntụpọ ebe ị nwere ike ịdabere na onwe gị, n'ọnọdụ ihe ọghọm ma ọ bụ ihe mberede, ọ na - abụkarị ihe egwu ebe ọ bụ na ịnọ naanị gị, ị ga - akpachara anya.
Copyright 2011, OMG Solutions Pte Ltd Haziri Site	OMG Solutions Pte Ltd